Clenbuterol (CLEN) HCL poda (21898-19-1) hplc≥98% | AASraw
Clenbuterol hydrochloride poda
/ Products / Fat Kurasikirwa poda / Clenbuterol (CLEN) HCL poda
Clenbuterol (CLEN) HCL poda
4.00 kupererwa ne 5 maererano ne 8 kasitoma ratings
SKU: 21898-19-1. Category: Fat Kurasikirwa poda
AASraw iri pamwe neyekushongedza uye kugona kugadzira kubva kugiramu kusvika kuhukuru hweClenbuterol (clen) HCL poda (21898-19-1), iri pasi peCGMP mutemo uye inotevedza yemhando yekudzora system.
Clenbuterol (CLEN) HCL poda vhidhiyo
|.Raw Clenbuterol (CLEN) HCL poda Basic Characters:
Name: Clenbuterol (CLEN) HCL poda
II.Raw Clenbuterol (CLEN) HCL poda kushandiswa mumaseroids steroid
Clenbuterol hydrochloride (CAS 21898-19-1) kazhinji inowanzotumidzwa kuClen, Clen HCL, nevanovaka muviri kana vashandisi vemafuta.
2. Clenbuterol HCL poda Kushandiswa:
Clenbuterol hydrochloride ine simba rakasimba rekupisa mafuta. Iyo ine zvakare yakakura thermogenic maitiro (inosimudza muviri temp). Clen inowedzera kuwedzera kweropa uye inoita kuti mwoyo ushande nesimba. Uku kukurudzira kunotungamira mukuwedzera kwekushisa kwemuviri. Maererano nedatha, inokonzerawo glycogenolysis (kuputsika kweglycogen), ndosaka ichibatsira kupisa mafuta emuviri.
3. Yambiro paClenbuterol HCL poda:
Sezvo vanhu vazhinji vakacherechedza, haufaniri kutora Clen kwevhiki dzinopfuura 2 mumutsara. Izvi ndechokuti avo vanotora nguva vanoda nguva yekugadzirisa zvakare uye Clen haichazobudiriri kana iwe usingatori kuputsa, uye hapana chivimbo chako chekutambira chichazove chakafanana.
4.Further mirairo paClenbuterol HCL poda:
Mumusika, kune akawanda fake Clen, iri Salbutamol yakajairwa.
Kana iwe uine iyo Clenbuterol iwe unofanirwa kutora kupisa kwako. Usati watanga kutenderera kweClen, tora tembiricha yako mangwanani uyezve uchinge uri paClen tora zvakare.
Kana chiri chaicho chiitiko iwe uchaona kuwedzera zvishoma pakupisa kwemuviri. Iwe unofanirwawo kuona kubatwa kweruoko uye kukurumidza kwazvo kurova kwemwoyo. Vamwe vako havazo zive mhedzisiro iyi pane yakaderera dosi, saka kumusoro kwechiitiko uye uone zvinoitika. Kana pasina chimwe chezvinhu izvi chikaitika kunyangwe iwe uri pamwero we80-100mcg, zviri pachena kuti wakarohwa.
5. Raw Clenbuterol HCL poda (CAS 21898-19-1):
Rinowanzo shandiswa "Clen" yekunyepa iSalbutamol, iyo inonziwo albutamol. Musiyano wakanyanya pane iwo dosi. Clen iri pa40mcg uye salbutamol iri pa100mg. Iwe unogona kungonhuwira iyo poda yakasviba uye ona kuti ndeipi chaiyo. Zvekuedzwa kwakachena, ungangoda kuita HPLC kuyedza.
6. Clenbuterol HCL poda Recipes:
Kugadzira Liquid Clen HCL poda pa100mcg / ml
ONA: Kutumira mameseji maviri aya kunogona kuve nengozi, usaite churu navo kunze kwekunge uchinyatsoziva zvauri kuita, kana kuti unogona kusimuka zvakanaka. Ona chinyorwa pazasi.
Mabhotoro uye anodonhedza (nezviyero pane anodonhedza)
Yakakura 12 Liter fluid mudziyo (bhakiti rinokwana)
Kugadzira 100mcg / ml Clenbuterol (Iyi kiyi inoshanda kuT3 zvakare).
Kana paine munhu akaona chero zvisiri izvo masvom ngaandizivise, asi ini ndinofunga ndiri pamari neiyi.
Iyo BA ndeyechokwadi yekunyungudusa hupfu uye kuchengeta iyo yakapedza chigadzirwa isina kushatisa, tenda kwandiri hapana chimwe chinosemesa ipapo wozoenda kunotora dosi rako rezuva nezuva uye nekuona kuti mamwe mabhakitiriya akaisa colony mune yako shit (yakaitwa ipapo). Saka isu tiri kuzoshandisa 1% mune iyi yekubheka.
Iyi yekubheka ndeyekushandura 1 gramu yeupfu (kana iyo math yangu iri chaiyo ichaita 10,000 doses).
Yakabviswa Mvura = 9.9 Liters (9,900 mL). Hongu iro marita, izvo hazvisi kukanganisa, zvakare izvi zviri kufungidzira kuti math yangu yakaringana.)
Nhanho 1. Isa paTyvek sutu. Kuchengetedza chinhu chinofanirwa neClenbuterol.
Nhanho 2. Isa pane masheji ekupenda.
Nhanho 3. Isa pamagloves. Kudzvanya kwavari mune sutu sarudzo.
Nhanho 4. Kuyera hupfu nehuremu. Iwe unoda ku100% shuwa yezvinangwa zveyero.
Nhanho 5. Wedzera hupfu kune beaker.
Nhanho 6. Wedzera BA kukurudzira kuti inyunguduke.
Nhanho 7. Isa mvura mumudziyo muhombe.
Nhanho 8. Wedzera Clen kusanganisa kumvura uye sanganisa chaizvo.
Nhanho 9. Isa mukati memabhodhoro uye wedzera kumusoro.
Chigadzirwa chekupedzisira chinofanira kunge chiri 10 marita eClen pa100mcg / ml.
Iyi yekubheka ndeyekunyepedzera varaidzo zvinangwa uye haifanire kuyedzwa. Aya ndiwo makemikari ane ngozi. Iyo zvekare fungidziro uye haina kumboitwa mukuita.
-IMO kune imwe chete nzira yekuita izvi usati waita zvinhu izvi mumabhakeji ... zvakanyanyisa ...
-step one- kuyera kunze kwe0.2g's (ehe thats chidimbu chegiramu, iwe unoverenga kurudyi)
-mvura 200mls yeeverclear mune dhayeti yekusanganisa yeimwe mhando, kana beaker
-kuda iyo 0.2g's yejekiti hupfu, uye woisa kupisa kwakaderera ...
-Mushure mekudengenyeka kwaro dururira iyo dizzolved solution mumudziyo muhombe yerumwe rudzi… ini ndinoshandisa gallon yemvura jug nechepamusoro rakabviswa.
-nowedzera 800ml yemvura yakadzika ...
-BAM!… Une 1000ml's yemvura yakachena @ 200mcg / ml
-Dhirowa kunze uye uzadze 50ml kana 100ml vials uye wako waita.
Clenbuterol HCL mapiritsi eupfu-20mcg
Magnesium inoba 1mg
1. Sakanidza zvinhu zvese zviri musanganiswa weTurbula, uye tsvaga kumatafura nekumanikidza kwe20kN.
2. Dzvinyirira mumapiritsi e100mg, uchishandisa 8mm punches.
7. Clenbuterol HCL poda Kushambadzira:
IV. Ungatenga sei Raw Clenbuterol HCL poda (CAS 21898-19-1); Tenga CLEN HCL poda kubva kuAASraw?